महाकालीमा यस वर्षकै उच्च पानीको बहाव - Janadesh Khabar
महाकालीमा यस वर्षकै उच्च पानीको बहाव
“विस्थापितलाई हामीले जनता प्राविमा आश्रय दिएर राखेका छौँ”, प्र.ना.नि. गुरुङले भने, “स्थानीय खोला थुनिदा छेउछाउका बस्ती जलमग्न भएका छन् ।” स्थानीय प्रशासनले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी महाकालीमा आइरहेको बाढीले दुई दिनदेखि नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलका संरचना भत्काउन थालेको छ । रु. तीन अर्ब ६७ करोडको लागतमा निर्माणाधीन पुलको पहुँचमार्ग भत्काउनुका साथै बाढीले दोधारा चादँनीसित जोड्ने अस्थायी बाटोसमेत अवरुद्ध गराएको छ ।
त्यसैगरी पुलअन्तर्गत महाकालीमा निर्माण गरिएको टापु (आइल्याण्ड) समेत बगाएको पुल निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । कुमार–सिएसइसी जेभीका इञ्जीनियर किशोरराज पाण्डेयले पुल संरचनामा बाढीले क्षति पुग्दा करोडाँै रकम बराबरको नोक्सान भएको बताए । “गत जेठमा पनि बाढी आउँदा रु. तीन करोडभन्दा बढीको क्षति भएको थियो”, उनले भने, “त्यसबेला कालोपत्र गर्न स्थापना गरिएको प्लान्ट नै बगाएको थियो ।”
६ असार २०७८, आइतवार १३:२३ बजे प्रकाशित
गुगल प्ले स्टोरमा जोकर भाइरसको आक्रमणबाट कसरी जोगिने?